Kalfadhiga 23-aad ee baarlamaanka Puntland oo maanta furmay. – Radio Daljir
Kalfadhiga 23-aad ee baarlamaanka Puntland oo maanta furmay.
Oktoobar 31, 2009 12:00 b 0
Garowe, Oct 31 – Kalfadhiiga barlamanka Puntland ayaa maanta si rasmi ah uga furay aqalka wakiillada Puntland ee magaalada Garoowe, kaasi oo ay ka soo xaadireen 49 mudane oo ka tirsan golaha baarlamaanka Puntland oo ka kooban 66 xubnood.
Kalfadhigaan oo ahaa midkii 23-aad ee ay yeeshaan golaha wakiillada Puntland ayaa waxaa goob joog ka ahaa m/weynaha dawladda Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Maxamuud ?Faroole?, isla markaana khudbad ka horjeediyey.
Guddoomiyaha golaha baarlamaanka Puntland C/rashiid Maxamed Xirsi, oo shir guddoominayey fadhigii maanta ayaa si rasmi ah u furay kulanka waxaana uu m/weynaha u sharraxay hawlaha baarlamaanka iyo qorshayaasha u hirgalay iyo kuwa hadda ay doonayaan in la gorfeeyo.
Guddoomiyuhu waxaa uu sheegay oo uu carabka ku adkeeyey arrimo badan oo ku saabsan hormarinta adeegyada bulshada Puntland, waxaana uu si gaar ah u xusay tallaabooyin waxqabad oo lagu soo kordhiyey dhismaha aqalka xildhibaanada sida Masaajid iyo goobo kale oo muhiim ah.
M/weynaha dawladda Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Maxmuud ?Farole? oo ka qayb galay furitaankii kalfadhigii golaha ee maanta, ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad ku qotontay xaaladda guud ee Puntland gaar ahaanna wuxuu si khaas ah u taabtay arrimaha nabadgalyada iyo heshiiskii deegaanka Igdhays ee gobolka Bari.
M/weynuhu waxaa uu sheegay in ay sameeyeen dadaallo dheeraad ah oo muddo badan xukuumad ahaan ay ku howllanaayeen oo ku aaddan xal u helidda khilaafkasta oo soo cusboonada isla markaana soo kala dhaxgala beelaha deggan Puntland, wuxuuna intaasi ku daray marna in ay loo baahnayn waxkasta oo colaad iyo dhibaato horseedi kara.
Dadka reer Puntland m/weynuhu waxaa uu u soo jeediyey in ay illaasadaan nabaddooda iyo deganaansha ay haystaan iyadoo laga duulayo colaadda iyo dhibaatada dabo dheeraatay ee muddada badan ka taagan gobollo badan oo dalka Soomaaliya ah.
C/fitaax Cumar Geedd
Buraale Yusuf, oo u hadlay ururka JNM ee sheegtay qaraxyadii ka dhacay Laascaanood oo aan waraysanay.
Galkacyo oo deggan iyo wadahadallo lagu soo afjarayo iska-horimaadkii shalay oo socda.
Kaydka Bil Dooro Luulyo 2022 Juunyo 2022 Maajo 2022 Abriil 2022 Maarso 2022 Febraayo 2022 Janaayo 2022 Diseembar 2021 Nofeembar 2021 Oktoobar 2021 Seteembar 2021 Agoosto 2021 Luulyo 2021 Juunyo 2021 Maajo 2021 Abriil 2021 Maarso 2021 Febraayo 2021 Janaayo 2021 Diseembar 2020 Nofeembar 2020 Oktoobar 2020 Seteembar 2020 Agoosto 2020 Luulyo 2020 Juunyo 2020 Maajo 2020 Abriil 2020 Maarso 2020 Febraayo 2020 Janaayo 2020 Diseembar 2019 Nofeembar 2019 Oktoobar 2019 Seteembar 2019 Agoosto 2019 Luulyo 2019 Juunyo 2019 Maajo 2019 Abriil 2019 Maarso 2019 Febraayo 2019 Janaayo 2019 Diseembar 2018 Nofeembar 2018 Oktoobar 2018 Seteembar 2018 Agoosto 2018 Luulyo 2018 Juunyo 2018 Maajo 2018 Abriil 2018 Maarso 2018 Febraayo 2018 Janaayo 2018 Diseembar 2017 Nofeembar 2017 Oktoobar 2017 Seteembar 2017 Agoosto 2017 Luulyo 2017 Juunyo 2017 Maajo 2017 Abriil 2017 Maarso 2017 Febraayo 2017 Janaayo 2017 Diseembar 2016 Nofeembar 2016 Oktoobar 2016 Seteembar 2016 Agoosto 2016 Luulyo 2016 Juunyo 2016 Maajo 2016 Abriil 2016 Maarso 2016 Febraayo 2016 Janaayo 2016 Diseembar 2015 Nofeembar 2015 Oktoobar 2015 Seteembar 2015 Agoosto 2015 Luulyo 2015 Juunyo 2015 Maajo 2015 Abriil 2015 Janaayo 2014 Diseembar 2013 Nofeembar 2013 Oktoobar 2013 Seteembar 2013 Agoosto 2013 Luulyo 2013 Juunyo 2013 Maajo 2013 Abriil 2013 Maarso 2013 Febraayo 2013 Janaayo 2013 Diseembar 2012 Nofeembar 2012 Oktoobar 2012 Seteembar 2012 Agoosto 2012 Luulyo 2012 Juunyo 2012 Maajo 2012 Abriil 2012 Maarso 2012 Febraayo 2012 Janaayo 2012 Diseembar 2011 Nofeembar 2011 Oktoobar 2011 Seteembar 2011 Agoosto 2011 Luulyo 2011 Juunyo 2011 Maajo 2011 Abriil 2011 Maarso 2011 Febraayo 2011 Janaayo 2011 Diseembar 2010 Nofeembar 2010 Oktoobar 2010 Seteembar 2010 Agoosto 2010 Luulyo 2010 Juunyo 2010 Maajo 2010 Abriil 2010 Maarso 2010 Febraayo 2010 Janaayo 2010 Diseembar 2009 Nofeembar 2009 Oktoobar 2009 Seteembar 2009 Agoosto 2009 Luulyo 2009 Juunyo 2009 Maajo 2009